Ndeipi yaive Yekutanga Magetsi Wiricheya? | Karman® Mawiricheya
Mawiricheya asingaremi, Retail, Time Machine, hwiricheya, Wiricheya Nhau
Ndeipi yaive Yekutanga Magetsi Wiricheya?
Posted on October 22, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
wokutanga wiricheya yemagetsi ndiye aive Klein Drive Chair uyo akagadzirwa neCanada mugadziri George Klein nechikwata chake muna 1953. Chikwata chake chakagadzira yakasarudzika pasuru yehunyanzvi iyo ichiripo maficha azvino yemagetsi mavhiripu nhasi. Pakutanga mawiricheya emagetsi zvaive zvakajairika mavhiripu nemota yakasungirirwa. An wiricheya yemagetsi inofambiswa nemabhatiri, ayo anotendera otomatiki kufamba kunodzorwa nemushandisi.
Most WWII mawiricheya zvaionekwa sechishandiso. Iyo wiricheya pachayo yakatanga zviuru zvemakore, uye pakave nekuyedza kwakawanda kugadzirisa chigaro chisina kudaro inoda mushandisi kuzvisimbisa kana kuda rubatsiro kubva kune mumwe munhu. Muna 1916, yekutanga wheelchair yemagetsi akauya panzvimbo.
Iyo Klein Drive Sachigaro yakagadzirwa muna 1953 uye huwandu hwakagadzirwa muna 1956 kuruzhinji. George Klein nechikwata chake vakagadzira iyo wiricheya yemagetsi apo ndaishandira iyo National Research Council yeCanada. Simba mavhiripu shanda nemota uchityaira vhiri kuti ritenderere. Icho chinangwa kuseri kwe wiricheya yemagetsi yaive yekubatsira varwi vakakuvara kubva muHondo Yenyika 2.
The lightweight Kumbofungatira wiricheya kwakatungamira mukugadzirwa kweKlein's mawiricheya emagetsi. Iyo kambani kwakagadzwa chigaro chaKlein yakagovanisawo yekutanga yekupeta chigaro mukati mekutanga kwema1930. Yaive sachigaro chetubular simbi uye yakasarudzika michina yezvinhu izvo zvakakurudzira uye kufuridzira Klien kuti aenderere mberi nezvaaiita.
Kugadzira kwake kwaisanganisira zvakakosha maficha izvo zvichiri kushandiswa mukugadzira kwanhasi. Izvi zvinosanganisira joystick, yakasimba kutenderera masisitimu, uye akapatsanurwa mavhiri anotyaira. Uku kwekutanga dhizaini yemufaro weiyo magetsi mavhiripu yaisanganisira zvisungo zvisere zvakasiyana. Izvi zvinzvimbo zvakatora mukana zvinogoneka kusanganiswa kweimwe kana maviri motors achivabvumidza kuenda kumberi, kumashure, uye kurega.
Iwo anodhiraivha pamavhiri maviri makuru echigaro akashandiswa pachinzvimbo chekutyaira kumwechete kwaive kudzivirira kupisa simba. Iwo maviri drive unit aireva nzira itsva yekutungamira nekubata uye nekuregeredza iwo madhiraivhu zvakazvimirira.
Chigaro cheKlein chaisanganisira bhokisi rakakosha raizoiswa pasi pechigaro checheya. Yaifanirwa kuchinjirwa ku zvinopa kukwana kwakakwana kwepasi. Izvi zvinodzivirira kupindira neiyo maneuverability checheya. Izvo zvakare zvakabvumidza kubviswa kuri nyore kwemabhatiri kuitira kuti vagogona kudzoreredzwa.
Kugadzirwa kwaGeorge Klein kwekutanga wiricheya yemagetsi yakagadzirira nzira yezvigaro zvemagetsi zvemazuva ano. Zvisinei, wiricheya tekinoroji inoenderera ichichinja kusvika nhasi. Zvino pane magetsi maguru izvo zvinosanganisira zvimwe zvinhu izvo zvinopa zvimwe nyaradzo yemushandisi. Mawiricheya emagetsi anoda hapana simba kubva kumushandisi iyo inobvumidza yakakura kwenguva refu nyaradzo. Ivo vane iyo kugona kuenda kumberi pasina mushandisi kuneta. Zvimiro zvinosanganisira kutsenhama uye tilting sarudzo idzo dzakanakira kudzikiswa uye kumwe kunobatsira kana kudikanwa kuhutano nekushanda. Ivo vane akasiyana drivetrains ayo anogona kufukidza akasiyana akasiyana terrains kubva pahuswa uye tsvina kune pavement.
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, Time Machine, hwiricheya, Wiricheya Nhau uye tagged kuremara, isina kurema wheelchair, kufamba, famba, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu.
KUSHANDISWA KWAKAITWA NEHONDO NEVANOTENGESWA